पर्यटन स्थल भादा– कसरी पुग्ने ?
शनिवार, आश्विन १०, २०७७ १२:१९:३०
शनिवार, माघ ४, २०७६ गोदावरी न्युज
धनगढी – पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि धनगढीको भादागाउँ होमस्टे होर्डिङ बोर्ड राखिएको छ । नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० लाई सफल पार्नका लागि धनगढी लेडी जेसिजको आयोजनामा थारु गाउँको होमस्टे जाने वाटोमा होर्डिङ बोर्ड राखिएको हो । पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि धनगढी लेडी जेसिजले धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ स्थित भादागाउँमा सुदुरपश्चिम प्रदेशको पर्यटन झल्कने होर्डिङ बोर्ड राखिएको धनगढी लेडी जेसिजकी अध्यक्ष लक्ष्मी शाहीले बताउनुभयो ।
भादामा थारू समुदायको परम्परागत जीवनशैलीको अवलोकन गर्न सकिन्छ । पर्यटकहरूका लागि तयार गरिएका घर पनि परम्परागत तवरले नै निर्माण भएका छन् । चारैतिर जंगलले घेरिएको भादा गाउँ निकै आकर्षक गाउँ हो । गाउँ नजिकै रहेको जोगिन्या ताल, पाँच किलोमिटर मात्रै टाढा रहेको बेहडाबाबा मन्दिर, गणेश सामुदायिक वन पर्यटकका लागि अवलोकन गर्ने महत्वपूर्ण स्थान हुन् । ताल वरपर क्षेत्रको शान्त वातावरणले त्यहाँ घुम्न जाने जो कोहीको मन लोभ्याउँछ । त्यहाँको सामुदायिक वन जंगली जनावर र जडीबुटीको भण्डार नै छ । वन क्षेत्रमा स–साना जंगली जनावर सजिलै देख्न सकिन्छ । ताल र बेहडा बाबा क्षेत्रको अवलोकनमा पनि पर्यटकलाई कुनै झन्झट छैन । पर्यटकलाई घुमाउन दुई ओटा लहरू (परम्परागत गोरूगाडा) तम्तयार हुन्छन् । लहरूमा एक पटक चारजनासम्म बस्न मिल्छ । लहरूमा बसे बापत केही शुल्क भने तिर्नुपर्ने हुन्छ । चारैतिर जंगलले घेरिएको भादा गाउँ निकै आकर्षक गाउँ हो । पर्यटकलाई गाउँ घुमाउन गाइडको समेत व्यवस्था छ । तिनले विभिन्न जानकारी दिँदै गाउँ घुमाउँछन् । खानपिनका लागि थारू समुदायमा पाइने प्रायः सबै परिकार यहाँ पाइन्छ । पर्यटकलाई नाचगान देखाउन सांस्कृतिक टोली बनाइएको छ ।
सदरमुकाम धनगढीबाट भादा जाने तीन ओटा बाटा छन् । जसमध्ये सबैभन्दा छोटो बाटो क्याम्पस रोडबाट थोरै पूर्व मोतीचोकबाट बायाँ हुँदै जाने बाटो हो, जसको दूरी १५ किलोमिटर मात्रै छ । मोतीचोकबाट बायाँ मोडेपछि सोझै केही जंगल क्षेत्र पार गरेपछि पटेला गाउँ पुगिन्छ । पटेला गाउँपछि खुटिया नदी तर्नुपर्छ । जहाँ, साइकल, मोटरसाइकल र पैदलयात्रुका लागि काठेपुल बनाइएको छ । अन्य सवारी साधनले नदी सहजै पार गर्न सक्छन् । नदी तरेपछि अर्को गाउँ लगत्तै शिवगंगा नदी आइपर्छ, त्यहाँ पनि खुटिया नदीमा जस्तै काठेपुल छ । त्यसपछि सुरू हुन्छ जंगल क्षेत्र, जहाँ थुप्रै बाटा छन् । हरेक दुईओटा बाटो आउनेबित्तिकै दाहिने बाटो समात्नुपर्छ । दाहिने बाटो समात्दै अघि बढेपछि तिलकपुरुवा गाउँ पुगिन्छ । त्यसको केही मिनेटमै आउने एउटा अर्को पुल तरेपछि गन्तव्य स्थल भादा गाउँ पुगिन्छ ।
भादा आन्तरिक तथा बाह्य दुवै खालका पर्यटकका लागि हो । विशेष गरेर बाह्य पर्यटकका लागि यो एकदमै उपयोगी हुन सक्छ । अझ थारू समुदायमा हराउँदै गएको परम्परागत पक्षबारे अध्ययन गर्नका लागि बढी उपयोगी हुन सक्छ । थारू समुदायको मात्रै बसोबास रहेको भादा गाउँ आफैंमा एक अध्ययन गर्नैपर्ने स्थान हो । कारण, यहाँको दैवी शक्तिले थारू बाहेक अरू कोही जाति स्थायी बसोबास गरेर टिक्न सक्तैन भन्ने गुरुबाहरूको भनाइ छ । अझ त्यसमाथि स्थानीय बासिन्दाले यो अवसर जुराएपछि अनुसन्धानकर्ताका लागि सुनमा सुगन्ध हुन सक्छ । कामको धपेडीबाट केही दिन थकान मार्न खोज्नेका लागि भादा गाउँ उपयुक्त थलो बन्न सक्छ । बजार क्षेत्रको बसाइभन्दा भादा गाउँ एकदमै सस्तो छ । एक जना अट्ने ओछ्यानको एक रातको मूल्य एक सय रुपैयाँ हो । अझ दुई जना अट्ने ओछ्यानको त डेढ सय मात्रै तिरे पुग्छ । खानेकुराको मूल्य भने परिकारपिच्छे फरक रहेको छ । जाडोमा आगो ताप्दै खानपिन गर्ने प्रयोजनले छुट्टै घरहरू बनाइएका छन् । हरेक घरका बीचमा अगेना राखिएको र ती अगेनाको चारैतिर आठजनाको समूह बसेर रमाइलोसँग खानपिन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
पर्यटकको सुरक्षाप्रति स्थानीय बासिन्दा संवेदनशील छन् । उनीहरूले पर्यटकका लागि केही नीति–नियम समेत बनाएका छन् । गाउँका युवालाई स्वयंसेवकक रूपमा खटाइन्छ । उनीहरूले पर्यटकलाई असुरक्षा महसुस भएका बेला सुरक्षा दिने गर्छन् । तर, स्थानीय बासिन्दाको नीति नियममा नबसेर अरूलाई असर पु¥याउने पर्यटकलाई स्वयंसेवकले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्छन् । परिवार सहित एक पल्ट घुम्न जाने पो हो कि भादा थारू गाउँ ?
प्रकाशित मिति: शनिवार, माघ ४, २०७६, ०५:४७:००